Vanyoreri vaida Apple TV +. Iyi nzira nyowani ndeyekuwedzera huwandu hwemaficha maficha | Ndinobva mac
Vanyoreri vaida Apple TV +. Iyo nyowani zano ndeyekuwedzera huwandu hwemaficha maficha
Apple yekumhanyisa multimedia sevhisi haisi yeayo ane vakanyanya kunyoresa kana vateveri. Icho ichokwadi chisingapindurike. Nekudaro, Apple hairegi iyo shanduko uye 180 degree kutendeuka. Kune izvi uye maererano neruzivo rwechizvino-zvino rwaunoda wedzera huwandu hwezvinhu zvemufirimu zvigadzirwa kuitira kukwezva vamwe vanobhadhara vashandisi vebasa.
Apple TV + haisi imwe yemasevhisi anogona kunyunyuta pamusoro pehuwandu hwevashandisi. Nekudaro, zvese zvinopenya haisi goridhe, nekuti vanyori vacho vane, ruzhinji harubhadharwe. Ivo vachiri kunakidzwa nenguva yavo yemahara iyo chokwadi chekutenga iyo iPhone kana zvimwe zvishandiso zvinosanganisirwa mukusimudzira zvakavapa. Ndokusaka iwe uchigara uchiita sarudzo. kuitira kuti uvandudze uye kuwedzera basa.
Tichangobva kukuudza kusaina kwaJessie Henderson, aimbove mutevedzeri wemutevedzeri wemutungamiriri wemafirimu ekushambadzira HBO Max Achave achijoinha timu yeApple TV + inotungamirwa naJamie Erlicht naZack Van Amburg, vachiudza Matt Dentler. Uku kusaina kwakakosha uye ikozvino tinoziva kuti nei. Zvinoenderana neruzivo rutsva rwakaburitswa nguva pfupi yadarika, Apple inoda basa rayo rekushambadzira kuti riitise huwandu hwakakura zvemukati mune mafirimu mafirimu pagore. Ndo iwo maitiro avo ekukwezva vamwe vanobhadhara vashandisi yakavakirwa pa.
Maererano ne mushumo mutsva kubva kuThe InformationApple yatove nenhamba shoma yemafirimu epamusoro, anosanganisira "Palmer," "Cherry," uye "Greyhound," uye anoiona senzira yekukwezva vanhu vazhinji kuApple TV +. Ndosaka anga achiudza vakuru ve studio kuti chinangwa chake ndechekuti inoita anopfuura gumi kusvika gumi nemaviri mafirimu epakutanga pagore yebasa revaraidzo. Izvi zvaizoibvumira kukwikwidza zvirinani nemamwe masevhisi ekushambadzira seNetflix, Hulu, Disney +, uye HBO Max.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Vanyoreri vaida Apple TV +. Iyo nyowani zano ndeyekuwedzera huwandu hwemaficha maficha
Iyo PodPod nyowani ine yakabatana iPad? Bloomberg inoti ndiyo nguva yemberi
Apple Music TV inowedzera kuUK uye Canada